International Hotel Mashaariicda - Hotel Armati Project In Shiinaha
Hotel Armati Project In Shiinaha
Mid ka mid ah Armati 5 bilaabaan mashruuca hotel ee Shiinaha, Asia, soo dhaweynayaa in ay booqo hotel this si ay u arkaan our qasabada.
Armati 447 catalouge qasabada taxane fadlan hubi soo socda:
Calan meel Ra'iisul Changsha, Changsha VAYA Hotel International oo joojisey wax kasta oo magaalada leeyahay in ay bixiyaan oo kaliya ka baxsan albaabka. Hantida qoreysa tiro balaadhan oo ah goobaha si aad joogtid khibrad wanaagsan. Ka faa'iidayso adeegga qolka 24-saac hotel ee, adeega qolka, qolka qoyska, baabuurta la dhigto, xarumaha martida naafada ah. Guestrooms waxaa lagu rakibay waxyaabaha oo dhan aad u baahan tahay hurdo ah habeen wanaagsan ee. In qaar ka mid ah qolalka, guests ka heli kartaa television, helitaanka internet - LAN (complimentary), qolalka sigaarka aan, helitaanka internet - wireless, qubeyska. Si kor loogu qaado joogo guests ', hotel waxay bixisaa tas-hiilaadka madadaalada sida Dabcan golf (goobta), sauna, massage, HBS, pool indoor. Shaqaalaha Friendly, goobaha weyn oo u dhaw in Changsha leeyahay in ay bixiyaan jira saddex sababood oo waaweyn oo waa inaad sii joogo Changsha VAYA Hotel International oo dhan